Ziva hunyengeri hwekushandura chero dhishi kuita mafuta ekupisa | Bezzia
Tony Torres | 11/01/2022 20:00 | Chipo chekubhadhara, Nutrition
Kuti uremerwe uremu zvakakosha kuwedzera kushaikwa kwekoriori, nekutsva kwemakori. Iyo isina imwe haisi chinhu, nekuti kuderedza uremu nenzira yakadzama uye ine hutano inopfuura nepakati pezvese zviri zviviri. Zvino nenzira imwechete iyo kudyisa hakurevi kuzviuraya nenzara, kuita zvemitambo hakurevi kuzviuraya kuti uzvirovedze kwemaawa asingagumi zuva nezuva.
Zvaunofanira kuziva ndezvekuti kudzidzisa kwakanaka kunokubatsira kupisa mafuta uye kuderedza uremu. Pamwe chete nekubatanidza zvimwe zvekudya mukudya kwako, zvinokubvumira kushandura chero ndiro kuti ive inopisa mafuta. Nokuti kune zvokudya zvine simba iri pamuviri uye kwavari isu tichashanda kuti tizadzise chinangwa chedu chekuonda. Iwe unoda here kuziva kuti ndeapi mubatanidzwa achakubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako?
1 Maitiro ekushandura chero dhishi kuita mafuta anopisa
1.1 Wedzera ginger mudzi kune ndiro dzako
1.2 Salads nevhiniga kupfeka
1.3 Wedzera ma prawn kumabikirwo ako epasta
1.4 Nyora ndiro dzako nemafuta anopisa zvinonhuwira
Maitiro ekushandura chero dhishi kuita mafuta anopisa
Zvimwe zvekudya zvine zvinhu zvinogadzira thermogenic effect mumuviri, iyo inokubvumira kupisa mafuta, kunyanya munzvimbo yedumbu. Zvimwe zvinhu zvinokubatsirawo kuderedza uremu, senge avo vanowedzera metabolism, Semuyenzaniso. Zvinhu izvi zvinogara zviripo muchikafu. Ndokunge, kana ukavasanganisa mukudya kwako nguva nenguva, unogona kushandura chero dhishi kuita kupisa mafuta.
Wedzera ginger mudzi kune ndiro dzako
Mudzi we ginger Iyo inoshamisa ine simba, sezvo nekuda kwehuwandu hwayo hunobatsira zvikuru kune hutano. ichi chimwe cheizvi zvokudya zvine thermogenic effect pamuviri, zvinoreva kuti kana ukawedzera ginger pakudya kwako, iwe uchapisa mafuta nekukurumidza uye zvakanyanya. Ginger inoshanda nenzira yakafanana nezvimwe zvekudya zvakaita sechili, izvo zvinowedzera tembiricha yemuviri wako uye zvinoita kuti upise mafuta.
Wedzera ginger kune yako yemiriwo purees uye makirimu, uye une zvakawanda zvingasarudzwa zve kudya kwemanheru kune utano kwaunogonawo kurasikirwa nemafuta ndisingatombozvizivi. Iwe unogona zvakare kuwedzera zvimwe zvinongedzo uye kuwedzera mhedzisiro, senge turmeric kana diki chili, kana iwe uchichifarira inonhuwirira.
Salads nevhiniga kupfeka
Vhiniga inewo ine simba-inopisa-inopisa mhedzisiro uye saka ndiyo yakakwana mubatsiri kune vese avo vanoda kuderedza uremu. Chinhu chine simba ichi inoderedza kuderedzwa kwemafuta, kuitira kuti iwe ugone kuibvisa nyore nyore. Tora saladhi nevhiniga yekupfeka zuva rega rega, unogona kushandura masaladhi egirinhi nevamwe zvichienderana neregumes. Iwe uchava nekudya kwakakwana kunoshandurwa kuva mafuta ekupisa.
Wedzera ma prawn kumabikirwo ako epasta
Maprawn, akasanganiswa nechilli diki, ane simba ekupisa mafuta kune chero avocado, uye anonaka zvakare. Izvi zvinodaro shrimp mapuroteni pamwe chete neiyo thermogenic mhedzisiro yechilli mhiripiri, gadzira yakanyanyisa simba yekupisa mafuta. Kana iwe ukawedzerawo kupfapfaidza kweremoni, unenge uchivandudza kushanda kwechiropa.
Nyora ndiro dzako nemafuta anopisa zvinonhuwira
Zvizhinji zvinonhuwira zvine thermogenic effect, ndiko kuti, zvinowedzera kupisa kwemuviri uye kubatsira kupisa mafuta emunharaunda. Mukuwedzera, zvinonhuhwirira zvinokutendera kuti unakirwe nendiro ine kunhuhwirira kwakawanda pasina kuwedzera macalorie, zvakare kuderedza sodium yekushandisa. Zvimwe zvezvinonhuhwira zvinonyanya kufarirwa panyaya iyi ndeizvi curry, mustard, turmeric, kana cayenne.
Kudzidza kusanganisa chikafu ndicho kiyi yekukwanisa kudya zvese zvine hutano, asi iwe unogona kuderedza uremu. Nokuti haisi yekushaya nzara, asi pamusoro pekudzidza kudya, kuzvidyisa nemishonga inodiwa kuitira kuti muviri ushande zvakanaka. Nakidzwa nechikafu, zvinonaka uye zvinonaka zvepanyika, nekuti izvo zvakapfuma zvikafu zvinozove zvechisikigo.
Nemanomano aya ekushandura ndiro dzako kuita zvinopisa mafuta, unogona kuderedza uremu zviri nyore. Ita mimwe mitambo nguva dzose kukurudzira kurasikirwa kwemafuta nezvimwe zvakadaro. iwe uchawedzera mabhenefiti eaya anopisa mafuta anobatana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Chipo chekubhadhara » Ziva hunyengeri hwekushandura chero dhishi kuita rinopisa mafuta